Soomaalida deggan Finland oo laga wacyi-geliyo khatarta Daacish – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Tiradda Dhallinyarradda Muslimiinta ku nool dalka Finland ee ku biirta Dagaalyahannadda Daacish ayaa la sheegay inay sii kordhayaan.
Waxaana jirta tobaneeyo Soomaali ah oo xilligii Summerka soo baxay, balse aan dib ugu soo laabanin Finland, kuwaasi oo la tuhunsan yahay inay ku biireen Daacish.
Xabbad Waedheere Soomaalida deggan magaalladda Espoo ee dalka Finland ayaa sheegay inay Dagaalamayaasha Daacish dhallinyarro ka qortaan dalka Finlad, si ay ugu soo biiraan dagaalladda ay ka wadaan dalalka Syria iyo Iraq.
Xabbad Waedheere oo shan sanno ka hor qaxooti ahaan ku tegay dalkaasi, ayaa sheegay inay shaqsi ahaan Daacish ka codsatay inuu ku soo biiro, balse uu ka diiday. Isagoo la hadlayey Warbaahinta Yle ee Finland waxa uu sheegay inay Daacish ku tashkiiliyaan Dhallinyarradda shaqo la’aanta hayso inay isaga soo tagaan Finland, iyagoo u ballanqaada haddii ay ku soo biiraan inay heli doonaan lacag badan.
Waxa uu sheegay inay Daacish dadka ku tashkiiliyaan Warbaahinta Bulshadda
Xabbad Wardheere, oo haatan 19 jir ah, isla markaana aysan wax ehel ah la joogin ayaa waxa uu ka hawlgalaa Xarun dadka da’da ah lagu xannaaneeyo oo ku taalla caasimadda dalka Finland ee Helsinki.
Waxa uu u sheegay Warbaahinta Yle inuu barto Cilmiga Daawada, isla markaana uu doonayo inuu mar uun tababarka Daawooyinka ka bilaabo gudaha dalka Somalia. Dhinaca kale, Ciiddanka Sirdoonka Finlad (Supo) waxay ku qiyaasaan inay 60 dhallinyarro haysata dhalashadda Finland ka dhoofeen dalka, kuna biireen Daagaalamayaasha Daacish ee ka dagaalanta dalalka Syria iyo Iraq.
Uhuru Kenyatta oo sheegay inay AMISOM kala shaqeyn doonaan deganaanshaha Somalia